Bolivia: Fetin’i St Roch ho fanomezam-boninahitra ny alika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2009 22:43 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, polski, English
Isaky ny 16 Aogositra no hankalazan'ny Boliviana ny fetin'ny St Roch (na San Roque amin'ny teny Espaniola), izay olo-masina mpiaro ny alika. Mety ho tsy dia malaza manerana ny firenena ny tantaran'ity olo-masina Frantsay ity, saingy manararaotra ihany ny Boliviana hanome fotoana manokana ny biby fiompiny ao an-trano.
Mety ho tsy zava-mora mandrakariva ny fiainan'ny alika araka ny fampahatsiarovan'ny mpamaham-bolongana iray ny mpamaky azy. Alberto Medrano ao amin'ny El Alto Noticias [es] no nanoratra fa “tsy tokony hohadinointsika eto El Alto sy La Paz fa maro ny alika mirenireny an-dalambe no marary ary misy hatrany ny maty.”
Maro manerana ny firenena ny alika tian'ny tompony, ka izao no andro fanararaotran'ny mpamaham-bolongana hanehoany ny fitiavany amin'ny alalan'ny median'olo-tsotra. Ho fanombohany ny lahatsorany dia nanome ny mombamomba ilay olo-masina amin'ny ambangovangony ny bolongan'ny Archbishop of La Paz.
Mety ho efa niresaka tamiareo ny tantaran'ny alikan'i St Roch ny ray amandreny na ny dadabenao sy ny nenibenao. Raha jerenao ny hajia dia ho tsikaritrao fa misy alika mahafinaritra eo anilan'ilay olo-masina. inona ny tantara ao ambadik'io alika io? Namonjy azy io.Amin'izao fotoana moa, indrindra rehefa amin'nyandro mafana, dia maro ny alika nahavita be no ariana eny an-dalambe. Angamba tsara ny manazava amin'ny olona hoe iza no mahavita zava-doza tahaka izany, momba ilay biby izany namonjy olona manana ny anjara toerany tahaka an'i Roch.
Araka ny fandehan'ny tantara dia nankany an'ala ny olo-masintsika mba tsy hamindra aretina amin'ny mponin'i Piacenza, fa isan'andro dia misy alika iray mitsidika azy hatrany sady manome tapa-mofo azy. Nalain'ilay alika avy amin'ny latabatry ny tompony izany mofo izany, izay olona mpanao asa soa antsoina hoe Gottardo Pallastrelli no tompony, raha nahita ny fihetsika ataon'ilay alika isan'andro dia nanapa-kevita ny hitsongo dia azy. Tamin'izany no nandehanany tany an'ala ka nahitan'izy ireo ilay olo-mahantra ambivitry ny ho faty. (…) tsara ihany koa ny miteny fa raha ny filazan'ny hafa dia io alika io ihany no nanasitrana ilay lehilahy, rehefa noleladelafiny ny tongotra maratrn'ilay lehilahy tany an'ala.
Saripikan'i Tomoyo nalain'i Edwin Velásquez ary alalana mihatra amin'ny dinan'ny Creative Commons.
Manararaotra manoratra ny momba ny alikany ny mpamaham-bolongana Boliviana sasantsasany, ary mizara tantara ny fiantraikan'ny fisian'izy ireo eo amin'ny fiainany. Edwin Velásquez no manoratra ny momba ny alikany izay nahafaly azy ny fisiany [es]:
Nahazo anarana vaovao, tompo vaovao ary fiainana vaovao i Tomoyo. Tsy maintsy nisaraka tamin'ny tompony teo aloha izy fa maro loatra ny alika nompian'ireo ka tsy voakarakarany avokoa izy rehetra. Raha nahalala izany ny raiko dia ividy azy ka nanome azy ahy. Nomeko anarana hafa izy, dia nampandroako sy nomeko sakafo. Natahotra i Tomoyo nandritra ny roa andro ka tsy nihinan-kanina, ary nampanahy ahy be ihany izany. Na izany aza noho ny faharetana sy ny fikarakarana dia efa tamàna amin'ny fiainany vaovao i Tomoyo.
Mpamaham-bolongana hafa mipetraka any Santa Cruz ihany koa dia i Maria Cristina Moreno no nirary soa ny alikany Danilo. Nosoratany ny fomba mety indrindra hankalazana ny fotoana:
Anio, ampifalifalio amin'ny fampitsangatsanganana azy, fanomezana azy sakafo tsara, rano madio sy fikarakarana ny biby fiompinao ao an-trano… fa ny alika no sakaizan'ny olombelona mahatoky indrindra…
Ary nametraka ihany koa ity lahatsary manaraka ity:
Farany, niari-tory nandritra ny iray alnia i José Luis avy ao amin'ny tanànan'i Yacuiba nitady ny tantaran'i St. Rocco ary nanoratra fa[es] “ tsy tokony ho vitan'ny andro iray (ny fanomezam-boninahitra ny alika)fa tokony ho isan'andro mihitsy.”